Umthendeleko weGetafe Negro 2016. Ushicilelo lwethoba. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I zi ganeko
Ukusukela nge-14 ukuya kwi-23 ka-Okthobha, ushicilelo lwethoba loMnyhadala weNoveli yamaPolisa eMadrid uyakwenzeka ziququzelelwe liBhunga leSixeko saseGetafe. Le dolophu isemazantsi oluntu lwaseMadrid sele iyikomkhulu lomgangatho wesinye seziganeko ezibaluleke kakhulu kuncwadi kwinkcubeko. Ngaphambili, umgcini wayo, umbhali uLorenzo Silva, kwakhona iphinda idibanise eyona ilungileyo kuhlobo lwesizwe nolwamazwe aphesheya olumnyama. Kodwa iya kuba ngoogxa abaninzi, abenzi beefilimu, intatheli, ababhali beempendulo, abahleli okanye iibhlog abaza kudibana ukuze baxoxe ngemicimbi yangoku, iindaba kunye neendlela ezintsha kuhlobo olo.
Lo nyaka ngulo IArgentina leli lizwe leendwendwe kwaye liza kuwongwa nalo mzobo de ophantse wavuma ngazwi linye ukuba ungumanduleli wohlobo: Edgar Allan Poe. Njengenxalenye ephambili yenkqubo, umdlali weqonga kunye nomlawuli weqonga uJose María Pou uyakufunda umdlalo weqonga ngumbhali waseMelika ongafiyo. Kodwa kuninzi kakhulu ...
Imixholo kunye nemisebenzi
Njengama-axes e-programmes, kulo nyaka siza kuthetha ngawo inkcubeko yokuxhatshazwa kuluntu lwanamhlanje. Ngokufanelekileyo, kwitafile ejikelezayo inani le Kukhutshwa iiCervantes, kuchaziwe ukuyisusa kumbono "osemthethweni" ngakumbi. Ingqwalasela iya kuba kwezinye izinto ezininzi eziqhelekileyo okanye ezincinci ezichanekileyo kwezopolitiko zombhali kaDon Quixote.
Umxholo wesithathu iya kuba yile iimbacu, apho olona lwaphulo-mthetho luza kuvavanywa khona: ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni, ukungakhathali koorhulumente okanye ukonyuka kohlaselo lwabemi. Kwaye ekugqibeleni baya kuthetha ideology kwinoveli yolwaphulo-mthetho, imida yayo okanye indlela enokuba nefuthe ngayo xa kusenziwa.
Phakathi kwezinto eziza kwenziwa kuzakubakho imiboniso kunye nokusayinwa kweencwadi, iindibano zocweyo, iintlanganiso, umculo, i-cinema, iithiyetha okanye ukhuphiswano. Zonke kwiindawo ezahlukeneyo eGetafe naseMadrid.
Njengonyaka ngamnye inani elifanelekileyo lolo hlobo luvula umnyhadala kwaye Ngeli xesha izakuba ngumbhali waseScotland uIan Rankin. Utata womhloli uJohn Rebus, omnye obalaseleyo nothotho olude, u-Rankin usandula ukuba se-Spain emva kokuphumelela i-X RBA Noir Award yesihloko sokugqibela kunye nepolisa lakhe elidumileyo.
Omnye umbhali wento yakutshanje yoncwadi lwabantsundu lwaseNordic naye uya kubonisa incwadi. Imalunga neNorway USamuel Bjørk ukuba, kunye neyakhe Ndihamba ndedwa kwaye ngoku intsha Isikhova, Ithembisa olunye uthotho olulungileyo lwesibini esichasayo.
Kanjalo, kuyakubakho imbinana elungileyo yababhali baseArgentina Isiqu sikaCarlos Salem okanye u-Ernesto Mallo. Kwaye kuya kubakho iingxoxo ezinomdla njengomzekelo waseBritane ULindsay Davis kunye negunya lesizwe kwinoveli yembali enguSantiago Posteguillo. Ukukwazi ukuthelekelela i-hound yamaRoma uMarco Didio Falco ekhankasela e-Hispania kunye ne-Scipio okanye e-Parthia kunye no-Trajan ngamava.
Omnye umntu waseArgentina, UJorge Fernández Díaz, kunye noArturo Pérez-Reverte nabo baya kuthetha ngemisebenzi yabo. Masikhumbule ukuba uPérez-Reverte uhambisa nje incwadi entsha, Falco, Kuthengiswa ngosuku olulandelayo 19, kumnyhadala opheleleyo. Kwaye esinye isibini esikhulu esiza kujongana nguDomingo Villar kunye noIgnacio del Valle. Ukusuka kwisivuno esingasentla se-71, aba babhali babini baphakathi kwabona bafundwa ngokubanzi kwaye baxatyisiwe ngabagxeki abakhethekileyo.
IDomingo Villar - Ignacio del Valle
Ukusuka eIgnacio del Valle bendisalinde ukudibana nomphathi wakhe uArturo Andrade. Nangona kunjalo, uMhloli Leo Caldas de Domingo Villar uneqhekeza elincinci elibalaseleyo entliziyweni yam. Ngapha koko, amabali abo, iimeko kunye nokuzonwabisa kwenzeka kwindawo endiyazi kakuhle njengeVigo, ichweba layo kunye nendawo ekungqongileyo. Ukuyifunda kuyonwabisa kabini kwaye ndiyacebisa kuwo wonke umntu, ngakumbi ukuba, njengam, uziva ubuthathaka Ipali yomhlaba waseGalician.
Ukujikeleza umngcelele wamagama abalulekileyo esizwe, baya kuhamba nabo UVictor del arbol, iToni Hill, uEmpar Fernández, uPere Cervantes kunye noClara Peñalver, Eziza kubonakalisa ukuvela kohlobo olu namhlanje.
Ngapha koko, ipowusta ngokuqinisekileyo ilungile. Kuya kuba kufanelekile ukutyelela kwanosuku olunye ngeyona Getafe yasekwindla kunye emnyama. Siza kubona ukuba kwenzeka njani, kodwa andithandabuzi ukuba iya kuba yimpumelelo kwakhona.
Ukubonisana ngakumbi kwinkqubo kunye nemicimbi eyahlukeneyo, unokufumana iwebhusayithi esemthethweni yomthendeleko: Getafe Mnyama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » I zi ganeko » Umthendeleko weGetafe Negro 2016. Ushicilelo lwethoba
Umhla onjani !!! UGetafe usizisela ababhali abakwiincwadi zam zoncwadi zeOlimpus. Ukusuka emthini, Villar, iBjork emangalisayo ... nangaphezulu kwendikuthandayo uPosteguillo, Enkosi kakhulu Mariola, uwenze umlomo wam wangumanzi.